Endritsoratra 15 tsy maintsy ananana vaovao ho an'ny mpamorona, maimaim-poana! | Famoronana an-tserasera
Melissa Perrotta | | Graphic Design, loharanom-baovao
Tao anatin'ireo taona faramparany dia nanatri-maso ny fitomboan'ny tsena typography. Izany no nahitantsika ny fisehoan'ny fianakaviana maro karazana vaovao, samy hafa serif, sans serif na script ary koa fantasy na temotra.
Ity fisehoan-javatra amin'ny fametrahana ny typography ho zavakanto ary amin'ny maha-matihanina ity dia mifandraika indrindra amin'ny fitomboan'ny sehatra haino aman-jery sy nomerika. Amin'io lafiny io, ny fitomboan'ny famolavolana dizitaly dia nanjary nila nanova endrika endritsoratra mety aseho. Etsy ankilany, azo ampifandraisina amin'ny famoronana programa famolavolana typografia izay manamora ny famoronana azy koa.
Tsy toy ny famolavolana maloto an'ny sekolin'i Soisa; izay voafetra ny loharanom-pahalalana ho an'ny endrika geometrika fototra, ny kofehy orthogonal ary ny fampiasana loko matevina; ny mpamorona ankehitriny dia manana endritsoratra maro karazana mamela azy hamolavola tetikasa fampisehoana famoronana lehibe kokoa.
Raha ampitahaina amin'ny famolavolana ny tapany voalohany tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ankehitriny dia tsy isalasalana fa betsaka kokoa ny azo atao amin'ny famokarana sary. Azo omena ampahany amin'ny fahasamihafana eo amin'ny loharanon-tsary izay azontsika ampiasaina. Izany no ahafahantsika miditra amin'ny loharanon-kalitao tsara sy tsy misy kalitao. Amin'ity tranga ity dia andraikitry ny mpamorona ny mahafantatra ny fotoana sy ny toerana hampiasana ny loharano tsirairay.
Na izany aza, ny marina dia hatramin'izao dia nisy be fianakaviana font vitsivitsy izay afaka nifaninana tamin'i Helvetica malala, Baskerville, Gill Sans, Gotham ary ny rahavavin'izy ireo.
Etsy ambany dia asehonay anao ny endritsoratra 15 ankehitriny izay tena ilaina amin'ny mpamolavola rehetra ary manome anao rohy izahay hahafahanao manao ampidino maimaim-poana ny fianakaviana font!
5 Sokafy Sans
8 Misotroa Neue
10 Takelaka Roboto
12 Lahatsoratra mena
Fotografia namana amin'ny lanjany tsirairay. Fifanarahana ambany sy lavorary ho an'ny fampisehoana sy ny analog.
Ireo karazany telo dia manana ny mampiavaka ny fomba maoderina malefaka malefaka.
Nantsoin'izy ireo hoe ny Helvetica vaovao. Ampiasaina amin'ny tranokala mihoatra ny 25000 izy io ary ny anatomy dia mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny karazana tetikasa.
Ity no loharanon'ny ankamaroan'ny tranonkala. Saro-pantarina izy io saingy maoderina ary ny tena mampiavaka azy dia ny famakiana mora foana.
Ny typeface noforonina hampiasaina aseho default. Noho izany, ny fomba mahamety indrindra azy ny famakiana azy.
Ny typeface noraisina tao amin'ny rafitra miasa paoma. Toy ny vokatra Apple rehetra, endri-tsoratra lavorary io endritsoratra io.
Typography malaza indrindra tamin'ny folo taona lasa. Niparitaka be ny fampiasana azy ary izy no mpiaro ny afisy sy marika marobe.
Alégre mety ho mpisolo toerana tonga lafatra ho an'i Bebas. Tsy mitovy amin'ny kerning sy ny zoro sasany izy ireo.
Nanjary fianakaviana malaza izy io noho ny azy endrika maivana sy mavitrika izay mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny tetikasa ankehitriny, marefo ary mirona.
Izy io dia karazan-tsoratra Serif misy endrika mivaingana fa miaraka faran'ny style calligraphic Azonao atao koa ny mahita ny kinova Sans Serif.
Tsy iray amin'ireo endritsoratra malaza indrindra ankehitriny izy io, fa ny toetrany no mahatonga azy ho tonga lafatra tetik'asa analog sy lahatsoratra.
Mate dia maotera Serif ho an'ny lahatsoratra. Manana vita tsara ny fomba matanjaka miaraka amin'ny famaranana calligraphic malalaka manome azy toetra sy dynamism.
Izy io dia karazan-tsoratra serif miaraka amina toetra mahafinaritra, fomba marefo ary vatana avo mety amin'ny fampisehoana ary lahatsoratra fohy.
Warnock angamba no maotera Serif lahy indrindra ary mahery nefa kanto ary be pitsiny efa nisy.
Ary fantatrao ve ireo endritsoratra hafa tianao ampiana ao amin'ilay lisitra? Avelao ao anaty hevitra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » loharanom-baovao » Endritsoratra 15 tsy maintsy ananana vaovao, maimaim-poana!
ambrasik dia hoy izy:
Nisoratra anarana tamin'ity pejy ity aho satria misy atiny mahaliana foana io, misaotra betsaka noho ireo asa malala-tanana rehetra ireo. Ao San Francisco, ilay misy azo alaina dia tsy mitovy amin'ny santionany: mety ho hadisoako daholo ny zava-drehetra ary nisy zavatra tsy nampidiriko, fa raha hitanao ohatra ny "y" amin'ilay santionany amin'ity pejy ity dia avy eo mankany amin'ny rohy ianao raha vao miditra (tsy mila misintona azy akory) dia hitanao fa tsy mitovy io "sy" io. Ity iray eto ity dia toa tsara tarehy sy kanto tokoa, mihevitra fa tsy diso ny fiheverako azy, fantatrao ve hoe aiza no mety ahazoako azy na farafaharatsiny inona no iantsoana azy? Misaotra indrindra anao!
Mamaly an'i ambrasik